Kooxda Jwxo-shiil, oo Xadhig u Maleegay Odayaal Ogadeen ah oo Degan Dalka Yemen – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo Xadhig u Maleegay Odayaal Ogadeen ah oo Degan Dalka Yemen
Mar 1, 2011 dambiile, Eritrea, ethiopia peace, Jwxo-shiil, Kooxda Jwxo-shiil, ogaden peace, oo Xadhig u Maleegay Odayaal Ogadeen ah oo Degan Dalka Yemen
Sanca, Mar 1, 2011 [ras] – Waxaa ka dhacday wadanka Yemen, gaar ahaana magaalada Sanca arin fool-xun oo ruux kasta oo maqlaa uu aad ula yaabi ficilada doqonimada ah ee ay ku dhaqmayaan kooxda Jwxo-shiil, iyaga oo u adeegaya xukuumada arggagixisada ah ee ka arimisa Eritrea.
Waxaa bishan February 23, 2011 magaalada Sanca xili habeen ah oo la hurdo, ay ciidamada nabad galiyada ee dalka Yemen ay u soo dhaceen guri uu daganaa oday caan ah oo la yidhaahdo Shaafici, kana soo jeeda gabalka Nogob. Ciidanka amaanka ayaa waxay kaxaysteen shan ruux oo uu ku jiro Shaafici.
Shaafici Barkhadle, waa 70 jiro dalka Yemen deganaa mudo dheer, kana macalin Jaamacd ku taal magaalada Sanca. Waxaa Odayga lala qabtay wiilkiis ah iyo wiil uu adeer u yahay iyo laba nin oo marti u ahayd, oo kuligood ka soo jeeda gabalka Nogob.
Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee halkaas degan ayaa aad ula yaabtay waxa odayga iyo dadka lala xidhay loo qabtay, waxaana la garan waayey sababta.
Jaaliyada ayaa aad isugu taxalujisay in ay ogaato sababta, shan maalmood ka dib Booliska ayaa Shaafici Barkhadle iyo dadkii lala xidhayba soo daayey, waxana Boolisku sheegeen in si khaldan wax loogu sheegay.
Boolisku waxay cadeeyeen in xadhiga dadkan ay ka dambeeyeen xubno ka tirsan Jaliyada Somalida Itobiya, waxayna ku dacweeyeen in odayga iyo dadka la joogaaba ay la shaqeeyaan ururka Alshabaab.
Shaafici Barkhadle, ayaa ah dadka aad u taageersan nabada iyo horumarka, si xoog lena uga soo horjeeda colaada iyo dhibaatooyinka ay Eritrea ka wado degaanka Somalida Itobiya.
Dadka ay dacweeyeen kooxda Jwxo-shiil, ayey magacyadoodu kala yihiin;
1- Shaafici Barkhadle waa oday wayn oo 70 Jir Aha Macalina ka ahaa YEMEN Inka badan 15 Sano
2- Wiilkiisa Axmed Shaafici Barkhadle [Da,ahaana Jira 15 Sano]
3- Cabdulahi Maxamed Cabdulaahi
4- Maxamuud Nuur Jaamac
5- Maxamed Muuse Xuseen
Afarta ruux ee u horeeya waa isku qoys waana reer Amaadin, waxaana ku jira oday Shaafici Barkhadle oo buka qabana neef, oo ah dakhsi dakhar kama kaco
Sixid: Iska Jira! Kooxda Jwxo-shiil, oo Wada Farsamo Cusub oo ay Dhaqaalo ku Guranayaan
Qaar ka Mid ah Kooxda Jwxo-shiil, oo Habeenkii Xalay Ahaa Muddo Gaaban ku Wada Hadlay Khadka Internet [Skype]